Ukwenziwa Kwemibono | Martech Zone
NgeSonto, Okthoba 21, 2012 NgeSonto, Okthoba 21, 2012 Douglas Karr
Kwaphela amakhulu eminyaka, incazelo ye- okukhiqizayo Kwakudingeka ukuthi kube nolayini wokukhiqiza othatha umkhiqizo kusuka ezintweni ezingavuthiwe uwuse ezimakethe. Ingcebo yalinganiswa ngamathani nokuqoshwa kwempahla nokuqoqwa kwempahla. Amabhange aboleke imali kususelwa ekutheni mangaki izimpahla owawunayo. Uhlelo lwethu lwezemfundo lwalungiselela intsha yethu ukuthi ifike ngesikhathi, ingene emgqeni wokwenza umsebenzi, futhi abasebenzi bahlukaniswa… umbala oluhlaza okwesibhakabhaka wagcina izandla zabo zingcolile futhi kwagadwa ukhololo omhlophe.
Abezombusazwe bethu bakhala ngokuthi silahlekelwe yimisebenzi yokukhiqiza… ukuthi baye phesheya kwezilwandle ezindaweni ezinabasebenzi abashibhile futhi okungekho mithetho. Bonke balwela ukubabuyisa. Bababuyisele kubani? Izingane zethu zingene shi ezikweletini ngemuva kokuxhasa ngemali imfundo enhle kakhulu emhlabeni. Baphothula ngqo ukungasebenzi. Amabhizinisi awaqashi… asadiliza abantu.
Ukukhiqizwa kwempahla akubuyi. Noma lelo qiniso seliba ngokoqobo, amabhange ethu, abaholi bethu, kanye nohlelo lwethu basalokhu behlulela impumelelo ngokuya ngokuthi baletha amawijethi amangaki kanye nokufunwa kwalamawijethi Noma kungamaselula noma imigqa yekhodi, umkhiqizo usasuselwa kumkhiqizo. Kepha imikhiqizo yokukhiqiza ayisekho lapho sithanda khona, futhi asikwazi ukukwenza ngokukhokhela uma sinikezwa ingcebo yezwe lethu.
Ngasikhathi sinye, ngokufika kwemidiya yedijithali, sibona imakethe entsha. Imakethe yemibono. Ikhompyutha engabizi kakhulu nokuxhuma kusakhele imigwaqo emikhulu yokuthi sikwazi ukuhambisa leyo mibono. Ngo- DK New Media, sinamakhasimende aze afika eSwitzerland, abaklami eRomania, abacwaningi baseNdiya, futhi sakha imibono lapha e-United States. Senze izindlela ezihlukile nezikhiqizwayo zokucwaningwa kwamabhuku, ukusebenzisa nokulinganisa impumelelo engenayo namakhasimende ethu.
Sivame ukucabanga ngakho umbono njengesinyathelo esisodwa esiholela kumkhiqizo. Lokho akudingeki ukuthi kube njalo. Umbono ungakwenza be umkhiqizo. Kunezinkampani eziningi, kufaka phakathi amaklayenti ethu amaningi, atshala imali emibonweni yethu. Impela, kuvame ukuhanjiswa okubambekayo okuhambisana nalokho… ukucwaningwa kwamabhuku, i-infographics, ukuhlaziywa, okuthunyelwe kwebhulogi. Kepha izikhathi eziningi, kumane kungumqondo. Futhi lapho sikwazi ukuthatha lowo mbono bese sikuguqula sibe yikhasimende, lowo umphumela webhizinisi obekufanele ukutshalwa kwemali.
Ulayini wethu wokukhiqiza ugcwele, futhi isidingo siyakhula. Inkinga, yiqiniso, ukuthi uhlelo alukuqapheli ukufunwa noma umkhiqizo. Uhlelo lusabiza lokhu ngokuthi a service. Uhlelo lusakholelwa ukuthi uma ngifuna ukukhulisa ibhizinisi lami, lokho okuwukuphela kwendlela yokukwenza ukukhulisa isibalo sami sabasebenzi. Azikho izimali mboleko zokukhiqiza imibono, awekho amafemu wokutshala imali okwenziwa imibono, futhi akukho ukuqashelwa emiphumeleni eyenziwe yilabo imibono.
Lesi akusona isikhalazo, lokhu ukubuka kanye nokubizelwa esenzweni. Konke ebesikutshala imali kuyo yonke le minyaka eSilicon Valley nakuyo yonke iNyuvesi bekuzosilungiselela lesi sikhathi… futhi siyakusifutha. Sipakisha ubuchopho bezingane zethu ngemfundo enhle kakhulu kepha baswele ugqozi nezinsizakusebenza zokuthatha imibono yabo bagijime nabo.
Asikho isikhathi esingcono sokwenza lokhu. Sinomnotho womhlaba wonke lapho singakwazi khona ukwenza imibono yethu ngobuchule obumangalisayo… siqoqa izinsiza kuzo zonke izingxenye zomhlaba, sisebenzise inqwaba yamathuluzi amahhala futhi ashibhile nge-Intanethi ukwakha izintambo zokukhiqiza, futhi silethe imibono yethu yokuthengisa emakethe… hhayi ezinyangeni noma eminyakeni… kodwa ngamahora nezinsuku.
Abaningi bangaba nabantu abanecala bacabange ukuthi, cishe abantu abayizigidi ezingama-40 abangasebenzi, lesi yisikhathi esibi kunazo zonke sogu lolwandle imisebenzi. Akusona isikhathi esibi kakhulu, yisikhathi esihle kakhulu. Uma ungathatha umbono wakho, uwuthuthukise, futhi uwulethe ngezinsizakusebenza ezingasogwini, ungawuthengisa futhi uwuthengise ngokushesha futhi kushibhile. Uma ukwazi ukuyithengisa, ungaphinda uyitshale leyo mali bese ukhulisa ibhizinisi lakho. Lokho kukhula yikho okusenze sakwazi ukuqasha iqembu lonke lapha e-Indianapolis.
Emavikini ambalwa, sizohlala bukhoma ngohlelo lokuqukethwe oluzosivumela ukuthi sixhume wonke amaklayenti ethu kwizinsizakusebenza ezingaphezu kwe-160 emhlabeni jikelele. Ithimba lethu lizokwakha ukugeleza komsebenzi, lihlanganise amaqembu, liqoqe, futhi lishicilele okuqukethwe okwenziwe ngalo. Umphumela wokugcina ngumkhiqizo osezingeni eliphakeme owakhiwe ngokushesha futhi ngemali ephansi. Sakha imigqa yethu yokukhiqiza!
Sekuyisikhathi sokuthi amandla ezepolitiki, amandla ezezimali namandla ebhizinisi abone amathuba esinawo phambi kwethu. Sekuyisikhathi sokuthi uhlelo lwethu lwezemfundo lukhuthaze futhi lufundise abafundi bethu - hhayi nje ukuthi bacabanga kanjani, kepha nokuthi baletha kanjani imibono yabo emakethe. Imakethe yemibono ayinamkhawulo, iyimakethe enkulu kunazo zonke ekhona.
Sidinga ukuqhubeka nokwenza ngcono amathuluzi alo makethe, sisebenzisa ngokugcwele umgwaqo omkhulu wolwazi osendaweni ngamathuluzi ezenhlalo, ukubambisana, ukuhamba komsebenzi kanye nokusebenzisana okuhlanganisa umhlaba wonke. Sidinga ukukhuthaza futhi sigqugquzele i- imakethe yemibono. Sidinga ukutshala imali emakethe yemibono. Asikho isikhathi esingcono kunamanje sokungena embonini yokukhiqiza… ukukhiqizwa kwemibono.
Ungalisebenzisa Kanjani ikhasi Lokufika